သမ္မာကျမ်းစာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ (ဒါဝိဒ်) – အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ
11Feb 2014 12 Sep 2018
BC ၁၀၁၀ မှ ၉၇၀ ခုနှစ် အတွင်းစိုးစံခဲ့သည့် အစ္စရေး နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ရုသ ၄ း၁၇ တွင် ဒါဝိဒ် (ဒေးဗစ်) ၏ နာမည်ကို ပထမဦးဆုံး ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သူသည် ဗက်လင် မြို့၏ သာမန် အညတြ သိုးကျောင်းသား ငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် ပြည့်ရှင် ဘုရင်မင်းမြတ် ဖြစ်လာရုံမက အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး၊ ရိုသေလေးစားခြင်း အခံရဆုံး ဘုရင်လည်းဖြစ်သည်။
သူသည် နန်းသက် အနှစ် (၄၀) အတွင်း ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော အစ္စရေးလ် လူမျိုး (၁၂) မျိုးကို စနစ်တကျ စုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီး အင်အားတောင့်တင်း ခိုင်မာသော ဂျူးအင်ပါယာ နိုင်ငံ တစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးလ် လူမျိုးတို့အား ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အနှောက်အယှက်ပေးခဲ့သော ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးများကိုပင် သိမ်းသွင်း အနိုင်ယူခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ ၏ နယ်နမိတ်ကို မြောက်ပိုင်း လက်ဘနွန် နိုင်ငံ နှင့် ဆီးရီးယား နိုင်ငံ အထိ၊ တောင်ပိုင်းတွင် အီဂျစ် နိုင်ငံအထိ၊ အရှေ့ဖက်တွင် ဂျော်ဒန် နိုင်ငံအထိ၊ အနောက်ဖက်တွင် မြေထဲပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းအထိ ချဲ့ထွင် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
အစ္စရေးလ် သမိုင်းတွင် သူ၏ အောင်မြင်မှု စွမ်းပကား ကြီးမားလွန်းသောကြောင့် နောင် ရာစုနှစ်များစွာကြာသောအချိန် တိုင်းတပါးမှ ကျူးကျော်သူ အင်အားစုများက အစ္စရေးလ် နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်လာသောအခါ၊ အစ္စရေးလ် လူမျိုးတို့သည် လွတ်လပ်ရေးကို အရယူပေးမည့် “ဘုရင် ဒါဝ်ဒ် ၏သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူပါ” ဟု ဘုရားသခင်ထံ အော်ဟစ်၍ ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။
ဒါဝိဒ် သည် သိုးမွေးမြူခြင်းဖြင့် အသက်မွေးသော Jesse ၏ သားထွေး ဖြစ်ပြီး ဗက်လင်မြို့၏ သိုးစားကျက် တောင်စွယ်၊ တောင်ကုန်းငယ် များတွင်လှည့်လည်နေထိုင်သော အညတြ သိုးကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ့တွင် အနည်းဆုံး အကိုကြီး (၇) ယောက်ရှိပြီး၊ အမ (၂) ယောက်ရှိသည်။ အံ့သြစရာ ကောင်းသည့် အချက်မှာ ဒါဝိဒ် သည် ဂျူးလူမျိုး (အစ္စရေးလ်လူမျိူး) စစ်စစ် တစ်ယောက်မဟုတ် ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ သူ့အဖွါး၏ မိခင်၏ နာမည်သည် ရုသ ဖြစ်ပြီး၊ အာရပ် လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ ယနေ့ ဂျော်ဒန် နိုင်ငံဟု ခေါ်သော အရပ်ဒေသမှဖြစ်သည်။
အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ၏ ပထမ ဘုရင်ဖြစ်သော ရှောလု မင်းကြီးသည် ဘုရားသခင် ကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြစ်မှားခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ရှောလု မင်းကို အခြားတယောက်ယောက် နှင့် အစားထိုးရန် အကြံအစည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် တမန်တော် ရှမွေလ အား ဗက်လင် မြို့သို့သွားပြီး Jesse ၏ သားများထဲမှ တစ်ယောက်ကို အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ မင်းလောင်းအဖြစ် ဘိသိက် ပေးရန် အတွက် တိတ်တဆိတ် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ရှမွေလအား ဘုရားသခင်က အပြင်ဘန်း ကြန်အင်လက္ခဏာ အားဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း မပြုရန်ကိုလည်း အတိအကျ သတိပေးသည် အကြောင်းမှာ လက်ရှိ မင်းလုပ် စိုးစံသော ရှောလု မင်းကြီးသည် အရပ်အမောင်း မြင့်မားပြီး ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသူ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသည် လူ၏ အဆင်းသဏ္ဍန် ကိုမကြည့်ဘဲ နှလုံး ကိုသာကြည့် ကြောင်း (ဓမ္မရာဇဝင် ပထမစောင် ၁၆း၇) တွင်ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ရှေးခေတ် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသ လူမျိုးစုများ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ညီအစ်ကို မောင်နှမများထဲတွင် အငယ်ဆုံး သောသူများသည် အကိုကြီးများလောက် အရေးမပါ အရာမရောက်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့် ဖခင်ကြီး Jesse က တမန်တော် ရှမွေလ လာရောက်သည့် အချိန်တွင် အငယ်ဆုံးသောသား ဒါဝိဒ်အား တောထဲတွင် သိုးများကို စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ပေး စေလွှတ်လိုက်ပြီး မင်းလောင်းအဖြစ် အရွေးခံရန် ပို၍အရေးပါ အရာရောက်မည် ဟု ထင်သော သားကြီး (၇ ) ယောက်နှင့် ပေးတွေ့သည်။ သို့ရာတွင် နောင်နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကြာသော အခါ သခင်ယေရှု မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း “နောက်ကျသောသူတို့သည် အရင်ကျကြလိမ့်မည်။ အရင်ကျသောသူတို့သည် နောက်ကျကြလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂၀း၁၆) ဆိုသည့် အတိုင်း တမန်တော် ရှမွေလသည် အကိုကြီး (ရ) ယောက်အစား ညစ်ထေး ပေကျန် နေသော ချာတိတ်ကလေး ဒါဝိဒ် ကိုသာ မင်းလောင်းအဖြစ် သံလွင်ဆီဖြင့် ဘိသိက်ပေး ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့ မှစပြီး ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ဒါဝိဒ်အပေါ် သက်ရောက်သည် (ဓမ္မရာဇဝင် ပထမ ၁၆း၁၃)။
ဤအဖြစ်အပျက်သည် ဒါဝိဒ် ၏ စိတ်ဓါတ်ကို အကြီးအကျယ် တွန်းအားပေးကာ ရဲရင့် ခိုင်မာသောသူ တစ်ယောက် အဖြစ်သို့ ရောက်စေခဲ့သည်။ သူနှင့် အတူ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် အမြဲရှိသည်ဟူသော အချက်က မိမိကိုယ်ကို မိမိယုံကြည်စိတ်ချမှု ရစေသည်။ မိမိတာဝန်ယူ ထိန်းကျောင်းသော သိုးများကို ကိုက်စားရန်လာသည့် ခြင်္သေ့ နှင့် ဝက်ဝံ များတို့၏ ပါးစပ်အတွင်းရောက်သွားသော သိုးငယ်များကိုပင် မရရအောင် ကယ်တင် လုယူရဲသည့် တိုင်အောင် ရဲရင့်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ စောင့်ရှောက်မှုအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချလာသည်။
နောက်ပိုင်း ရန်သူ ပါလက်စတိုင်း စစ်တပ်၏ အသန်ဆုံးသော လူသား၊ (၇) ပေ မှ (၁၀) ခန့် အရပ်အမောင်း ရှိသော (အချို့သော ရှေးကျမ်းပိုဒ်များတွင် (၇) ပေဟု ဖော်ပြပြီး အချို့ကျမ်းပိုဒ်များတွင် (၁၀)ပေ ခန့်ဟုဖော်ပြထားသည်) ဂေါလျက် ကို ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက်ခွင့် ပေးရန် ရှောလုမင်းအား သံတော်ဦးတင် တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။ အချိန်ကား ဗက်သ်လဟင် မြို့၏ အနောက်ဖက် နေ့တစ်ဝက် ခရီးအကွာ Elah ဟုခေါ်သော အရပ်ဒေသတွင် ဒါဝိဒ်၏ အကိုကြီးများသည် စစ်သည်တော်များအဖြစ် ရှောလုမင်း၏ စစ်တပ်စခန်းချရာတွင် စစ်မှုထမ်းဆောင်သည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ ဖခင်ကြီး Jesse က ဒါဝိဒ်အား ရှေ့တန်းရောက် အကိုကြီးများ စားသောက်ရန် အတွက် ပေါင်မုန့် များယူသွားပေးရန် သားထွေး ဒါဝိဒ်အား စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ် ရောက်သွားသည့် အချိန်တွင် လွင်ပြင် တစ်ခု၏ တဖက်တချက် တွင် အသီးသီး တပ်ချကာ နေရာယူနေကြသော အစ္စရေးလ် စစ်သားများနှင့် ပါလက်စတိုင်း စစ်သားများသည် အချင်းချင်း ရန်စောင်တိုက်ခိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြချိန်ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးလ် စစ်သားများ နေ့တိုင်းကြားနေကျ အသံဖြစ်သော လူ့ဘီလူး ဂေါလျက် ၏ စိန်ခေါ်အော်ဟစ်သံကိုလည်း ဒါဝိဒ် ရောက်သည့် အချိန်တွင် ကြားလိုက်ရသည်။ သတ္တိရှိသောသူ သူနှင့် တစ်ဦးချင်း သတ်ဖျက် တိုက်ခိုက်ရန် ဂေါလျက်က နေ့ရက်စဉ်တိုင်း စိန်ခေါ်သည်၊ ရှုံးနိမ့်သောသူ ဖက်က ဤစစ်ပွဲတွင် အရှုံးပေးရမည်ဟု အသံကုန် အော်ဟစ် စိန်ခေါ်သည်။ ဂေါလျက် ကိုယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရန် မည်သူ တစ်ယောက် မျှ မထွက်ဝန့် သဖြင့် ဂေါလျက်အား အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်နိုင်သူကို သမီးတော်နှင့် လက်ဆက်ပေးမည့်အပြင် တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံး ရာသက်ပန် ဘုရင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည်ဟု ရှောလု မင်းကြီးက ကြေငြာထားသည်။
၁၂၅ ပေါင်ခန့်သာ ရှိမည့် ဒါဝိဒ်သည် အစ္စရေးလ် စစ်တပ်ကိုယ်စား လူ့ဘီလူး ဂေါလျက်ကြီးကို တိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးရန် ရှောလုဘုရင်မင်းကြီးထံ လျှောက်လဲသည်။ ဂေါလျက် ကိုင်ဆောင်သော လှံတံ သည် (ရ) ပေခန့် ရှည်ပြီး သံနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ထိပ်ဖူးသည် ၁၅ ပေါင်ခန့် အလေးချိန်ရှိသည်။ ကိုယ်တွင် ဝတ်ဆင်သည် သံစစ်ဝတ်တန်ဆာသည် (၆)လက်မ ခန့် အထူရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအချိန်တွင် အစ္စရေးလ် စစ်တပ်သည် ကြေးနှင့် ပြုလုပ်ထားသော စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုကာ ပါလက်စတိုင်း စစ်တပ်တွင် သံနှင့် ပြုလုပ်သော လှံတံ၊ ဓါး နှင့် စစ်လက်နက် များကို အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပြီး သံထည်ဖြင့် ပြုလုပ်သော လက်နက်များဖြင့် ကြေးထည်ဖြင့် ပြုလုပ်သော စစ်လက်နက်များကို အလွယ်တကူ ရိုက်ချိုး၊ ခုတ်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် ဒါဝိဒ်သည် လူ့ဘီလူး ဂေါလျက်ကို အလွယ်တကူ အနိုင်ရသတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဂေါလျက်ကို တိုက်ခိုက်ရန် အသွား ကျောက်ခဲ ၅ လုံးကို ကောက်ယူကာ လက်လွဲလေးဖြင့် တချက် လွဲပစ် လိုက်ရာ ဂေါလျက်၏ နဖူးတည့်တည့် ထိမှန်ပြီး လဲကျသွားသည်။ ထို့နောက် လူ့ဘီလူး၏ ခါးမှဓါးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ခေါင်းကိုဖြတ်ကာ သတ်လိုက်သည်။ အဝေးမှ စောင့်ကြည့်နေကြသော ပါလက်စတိုင်း စစ်တပ် တစ်ခုလုံး မှင်သေကာ၊ ထို့နောက် ကြောက်လန့်တကြား ဖရိုဖရဲ ထွက်ပြေးသွားကြသည်။ အစ္စရေးလ် စစ်သားများက ထွက်ပြေးသော ပါလက်စတိုင်း စစ်သားများကို လိုက်လံ သတ်ဖြတ်ရာ ရန်သူ တို့၏ စစ်စခန်း (၂) ခုဖြစ်သော Gath နှင့် Ekron ထိတိုင်အောင် လိုက်လံတိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့ညမှစပြီး ဒါဝိဒ်ကလေးသည် ရှောလု မင်း၏ နန်းတော်ထဲ ရောက်ရှိခဲ့ရပြီး ရှောလုမင်း ၏သား Jonathan နှင့် အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သွားကြသည်။ ရှောလုမင်းကြီး စေခိုင်းသည့် အရာအားလုံးကို ဒါဝိဒ် တဝေမသိမ်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ရှောလုမင်းသည် ဒါဝိဒ်အား စစ်သေနာပတိချုပ် အဖြစ်ခန့်လိုက်သည်။ စစ်တပ်တစ်ခုလုံးနှင့် နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကို ဒါဝိဒ် ရရှိသည်။
စစ်တိုက်၍ ပြန်လာသော အချိန်တိုင်းတွင် ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး သီချင်းများဖြင့် သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုလေ့ရှိရာ “ရှောလုအထောင်ထောင်၊ ဒါဝိဒ်အသောင်းသောင်း သတ်လေစွ တကား” (ဓမ္မရာဇဝင် ပထမ ၁၈း၇) ဟုသီဆိုကြသော အသံကို ရှောလုမင်း စိတ်တွင် ခုလာတတ်သည်။ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက ဒါဝိဒ် ကို အထင်ကြီးလေးစားသည်ကို သဝန်တို ငြိုငြင်လာကာ ဒါဝ်ဒ် ကို သတ်ရန်ကြံစည်လာသည်။ နန်းတော်တွင် ဒါဝိဒ် စောင်းတီးနေစဉ် လှံဖြင့် သတ်ရန် ပေါက်သည်အထိ အခြေအနေဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင် တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးစေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒါဝိဒ်အား တိုက်ပွဲပြင်းထန်သည့် စစ်မျက်နှာ သို့ စေလွှတ်သည်။ ဒါဝိဒ် စစ်ပွဲတွင် မကျဆုံးသည့်အပြင် ပြည်သူလူထု ၏ ကြည်ညိုလေးစား မှု တနေ့တခြား တက်လာသည်။ တကြိမ်တွင် သူ၏ သမီးတော် Michal နှင့် လက်ထပ်ခွင့် ရရန်အတွက် ရန်သူ ပါလက်စတိုင်း အယောက် (၁၀၀) ကို သတ်ဖြတ်ရမည် ဟုစေခိုင်းသည်။ ဒါဝိဒ် က ပါလက်စတိုင်း အယောက် (၂၀၀) ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ရှောလု မင်း၏ သမီးတော်ကို အရယူသည်။
ဘုရင် ရှောလု မင်းသည် ဒါဝိဒ် ၏ နေအိမ်သို့ သူ၏လူများကို စေလွှတ်ပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် စေခိုင်းခဲ့ဘူးသည်။ ဒါဝိဒ် ၏ အမျိုးသမီး ရှောလုမင်း၏ သမီးတော် Michal ၏ ကူညီမှုဖြင့် အသက်ဘေးမှ သီသီကလေးလွတ်သွားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ရှောလု မင်းနတ်ရွာစံ သည်အထိ ဒါဝိဒ် သည် ဝရမ်းပြေး ဘဝအနေဖြင့် တိမ်းရှောင် ပုန်းအောင်း သွားလာခဲ့ရသည်။ သို့သော် သူတစ်ယောက်ထဲတော့ မဟုတ်ပါ၊ သူ၏ အကိုများနှင့် ပုန်းရှောင်သွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ပြဿနာ တစ်ခုခုကြောင့် ပုန်းရှောင်လိုသူများ၊ အကြွေးပြဿနာကြောင့် ပုန်းရှောင်တိမ်းအောင်း လိုသူများ ဒါဝိဒ် နှင့် အဖွဲ့ထံခိုလုံရန် ဝင်ရောက်လာရင်း နောက်ပိုင်း နောက်လိုက် လူ (၄၀၀) ခန့် အထိတိုးပွားလာသည်။ (ဓမ္မရာဇဝင် ပထမ ၂၂း၂)။
ရှောလု မင်းသည်ဒါဝိဒ် ကိုလုပ်ကြံရန် အတွက် မနားမနေ အားထုတ်သည်။ တကြိမ်တွင် ရှောလုမင်းသည် ဒါဝိဒ်နှင့် နောက်လိုက် အပေါင်းအပါ တို့ကို အမဲလိုက်သလို လိုက်ရှာရင်း ဗက်သလီဟင် မြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် မိုင် (၂၀) ခန့် အကွာ ပင်လယ်သေ ၏ ကမ်းခြေအနီး En-gedi ဟုခေါ်ဝေါ်သော ဂူတစ်ခု အရောက်တွင် မောပန်းလာသဖြင့် စက်တော်ခေါ်ကာ အနားယူသည်။ ထိုဂူထဲတွင် ဒါဝိဒ် နှင့် အပေါင်းအပါများ ရှိနေသည်ကို ရှောလုမင်း မသိရှိခဲ့ပါ။ ဒါဝိဒ် ၏ တပည့်များက ရှောလုမင်း အားခေါင်းဖြတ်သတ်ရန် အဆိုပြုသော်လည်း ဘုရားသခင် ဘိသိက် ပေးသော မင်းကြီးဖြစ်သောကြောင့် မသတ်ဖြတ်နိုင်ဟု ငြင်းသည် (ဓမ္မရာဇဝင် ပထမ ၂၄း၆)။ ဒါဝိဒ်က ရှောလုမင်း၏ ဝတ်ရုံတော် တစ်စကို ဓါးဖြင့် ဖြတ်ပြီး တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွါသွားသည်။ တနေရာ ရောက်သောအခါ ရှောလုမင်းအား အော်ဟစ်ကာ နှိုးလိုက်သည်။ ဖြတ်တောက် ယူဆောင်လာသော ရှောလုမင်း၏ ဝတ်လုံတော် အစကို လက်ဖြင့် ဝှေ့ဝဲပြရင်း သူသည် မင်းကြီးကို သတ်ဖြတ်လိုလျှင် သတ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရခဲ့ကြောင်း သို့သော် မင်းကြီးအပေါ် သစ္စာစောင့်ထိမ်းကြောင်း ထာဝရဘုရားသခင် က တရားစီရင်တော်မူပါစေ ဟု အော်ဟစ် တိုင်တည်သည်။ ရှောလုမင်းလည်း နောင်တ အကြီးအကျယ် ရပြီး သင်ပြုသော ဤကောင်းမှုသစ္စာကြောင့် သင့်အပေါ် ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ၊ တနေ့နေ့တွင် သင် ဘုရင် ဖြစ်မည်ကို ယခုငါနားလည်ပြီ ဟု ပြန်အော်ပြီး ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျလျက် နန်းတော်သို့ ပြန်သည်။
သို့သော် အခိုက်အတန့်ကြာသော အခါ ရှောလုမင်းကြီးသည် ဒါဝိဒ် နှင့် နောက်လိုက် အပေါင်းအပါများကို အမဲလိုက်သလို လိုက်ရှာပြန်သည်။ ဤတကြိမ်တွင် ဒါဝိဒ် နှင့်အပေါင်းအပါများအား ရန်သူ ပါလက်စတိုင်း နယ်ထဲ ကျွံ့ဝင်မိပြီးသားဖြစ်ရန် လိုက်တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတိအကျ ဆိုရမည်ဆိုလျှင် ဒါဝိဒ် ၏ လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးသော ပါလက်စတိုင်း ဘုရင်လူ့ဘီလူး ဂေါလျက် ၏ ဇာတိချက်ကြွေ – Gath အရပ်ဒေသဖက်သို့ မောင်းထုတ်သည့် သဘောဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ပါလက်စတိုင်း ဒေသတွင် ဂျူးဘာသာဝင်မဟုတ်သော Amalekites အစ္စရေးလ် များကို လိုက်လံ သုတ်သင်ရှင်းလင်း နေသည့် အချိန်အခါ ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွါးသော ပါလက်စတိုင်း မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနှင့် ရှောလု မင်းကြီးဦးဆောင်သော အစ္စရေးလ် စစ်တပ် တို့၏ ပြင်းထန်သော စစ်ပွဲတိုက်ခိုက်နေသည့် အချိန်တွင်ပင် ဒါဝိဒ် နှင့် နောက်လိုက် အပေါင်းအပါများသည် ပါလက်စတိုင်း တို့၏ နယ်မြေအတွင်းတွင် လှည့်လှည်ကျက်စား လျက်ပုန်းအောင်းနေသေးသည်။ ဒါဝိဒ် သည် ပါလက်စတိုင်း တပ်ပေါင်းစု နှင့် ပူးပေါင်းသည်။ သို့သော် အချို့သော ပါလက်စတိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များက ဒါဝိဒ် ကို လက်ခံရန် ငြင်းဆန်သည်။ ရှောလု မင်း၏တပ်နှင့် ရှေ့တန်းတွင် တိုက်ခိုက်နေချိန်တွင် ဒါဝိဒ် နှင့်အပေါင်းအပါများက ပါလက်စတိုင်းတပ်ပေါင်းစုကို အနောက်မှ ပြန်တိုက်မည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒါဝိဒ် နှင့်နောက်လိုက်များကို တိုက်ပွဲတွင် သူတို့နှင့် အတူ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရန် အခွင့်မပေးဘဲ ပြန်လွှတ် လိုက်သည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် အစ္စရေးလ် စစ်တပ် စစ်ရှုံးကာ၊ ရှောလုမင်း နှင့် သားတော် သုံးယောက် ကျဆုံးရာ ဒါဝိဒ် ၏ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း Jonathan လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ရှောလုမင်း နှင့် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း အတွက် ဒါဝိဒ် ဝမ်းနည်း ပူဆွေးခဲ့ရသည်။
ရှောလုမင်း တိုက်ပွဲ ကျပြီးနောက်ပိုင်း ဘုရင် ၏ အရိုက်အရာ ကို ဆက်ခံမည့် သူကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပွါးလာသည်။ တောင်ပိုင်း အရပ်ဒေသတွင် ဒါဝိဒ် အားဘုရင်အဖြစ် တင်မြောက်လိုကြသော်လည်း မြောက်ပိုင်းအရပ် ဒေသမှ အစ္စရေးလ် များနှင့် ရှောလုမင်း၏ စစ်ဗိုလ်ဦးစီးချုပ်က ရှောလုမင်း၏ သားတော် တပါးဖြစ်သော Ishbosheth ကို ရှောလုမင်း၏ အရိုက်အရာ ကို ဆက်ခံမည့် ဘုရင်အဖြစ် ကြေငြာသည်။ တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းအကြား ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွါးသည်။ သို့သော် Ishbosheth ၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ် နှစ်ယောက်က Ishbosheth ကို ခေါင်းဖြတ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး၊ ဒါဝိဒ် ထံသို့ ခေါင်းပြတ် ကိုယူဆောင်လာသည်။ ဒါဝိဒ်သည် သူ၏ ယောက်ဖ ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လာသူ စစ်ဗိုလ်ချုပ် နှစ်ယောက်အပေါ် အမျက်ထွက်ကာ ကွပ်မျက်လိုက်သည်။
တောင်ပိုင်းဒေသ မြို့တော်ဖြစ်သော ဟေဗရွန်မြို့တွင် ဂျူး မျိုးနွယ်စု (၁၂) စု စည်းဝေးတိုင်ပင်ကြပြီး ရှောလုမင်း၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံမည့် တော်ဝင် အနွယ် တစ်ယောက်မျှ မရှိတော့ သဖြင့် ဒါဝိဒ် အား အစ္စရေးလ် နိုင်ငံတော် (United Israel) ၏ ဘုရင် အဖြစ် တညီတညွတ်ရွေးချယ် ခန့်အပ်လိုက်ကြသည်။
ဒါဝိဒ် မင်းကြီးသည် သူ၏ နန်းစိုက်ရာ မြို့တော်အဖြစ် ဂျေရုဆလင် မြို့ကို ရွေးချယ်လိုက်သည်။ အစ္စရေးလ် မျိုးနွယ်စု အဓိက (၁၂) စုတွင် မည်သည့် မျိုးနွယ်စုကိုမျှ အလေးမပေး ညီတူညီမျှ ထားသည်ကို ပြသလိုခြင်း ကြောင့် မည်သည့် မျိုးနွယ်စုမျှ၏ မြို့တော် မဟုတ်သော၊ ထိုအချိန် ခါနန်လူမျိုးတို့ နေထိုင်ရာ ဂျေရုရှလင်ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ကာ မြို့တော်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဤ မြို့သည် အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသော ကြောင့်လည်း ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျေရုဆလင် ကို သိမ်းပိုက်ပြီး ဂျူးလူမျိုးတို့ အထွဋ်အမြတ်ထားသော ပဋိညဉ်သေတ္တာနှင့်၊ ဘာသာရေး အမွေအနှစ် များအားလုံးကို ထားရှိသဖြင့် အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ၏ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွါးရေး မြို့တော်ဖြစ်လာသည်။ အစ္စရေးလ် လူမျိုးတို့၏ သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် မျိုးနွယ်စု (၁၂) စု အတူတကွ စည်းစည်းလုံးလုံး စုစည်းနေထိုင်သည့် နိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အီဂျစ် နှင့် ဆီးရီးယား အင်ပါယာ နိုင်ငံများကို အံတု ဆိုင်ပြိုင်လာနိုင်ပြီး ဘုရားသခင် ကတိတော်ထားသည့် နယ်ပယ် အားလုံးကို နိုင်ငံတော် အတွင်း ထည့်သွင်းသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့သည့် အပြင် ယနေ့ လက်ဘနွန်၊ ဆီးရီးယား နှင့် ဂျော်ဒန် နိုင်ငံ တို့ ၏ တစိတ်တဒေသ များကိုပါ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သည်။
ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် သူ၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက်၏ ဇနီး Bathsheba ရေချိုးနေစဉ် အမှတ်မထင် မြင်မိ၍ ပြစ်မှားစိတ် ဝင်သည့် အချိန်တွင် မယားအဖြစ် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး ခုနစ်ယောက် မိဘုရားများအဖြစ် ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တစ်ခုသော ညနေစောင်း တရေးနိုးထသည့် အချိန်၊ လေသာဆောင် နန်းတော်အမိုး ပေါ် ထွက် လျှောက်စဉ် Bathsheba ရေချိုးနေသည်ကို အဝေးမှ မြင်ရာ သူမကို နန်းတော်သို့ အခစားဝင်ရန် ခေါ်ခိုင်းပြီး လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု ကျူးလွန်ကာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်သည် အခြေအနေအထိ ရောက်သွားသည်။ ဒါဝိဒ် မင်းသည် ရှေ့တန်း စစ်မျက်နာတွင် စစ်မှုထမ်းနေသော သူမ၏ အမျိုးသား Uriah ကိုအိမ်ပြန်ရန် ခေါ်ယူသည်။ သူ့ မိန်းမ ဆောင်သော ကိုယ်ဝန် သည် သူ့ခဏတာ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နာမှ ပြန်လာသော အချိန်တွင် ရရှိသောကိုယ်ဝန် ဖြစ်သည်ဟု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် တိုက်ပွဲဝင်နေစဉ် အမျိုးသမီးနှင့် ကာမ စပ်ယှက်ခြင်း အမှုကိုရှောင်ကြဉ်သည့် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ကို အလေးအနက်ထား ကျင့်သုံးသဖြင့်၊ သူ့အား ချိတ်ပိတ် ထားသော ဘုရင့် အမိန့်တော် ပေလွှာတစ်ရွက် သယ်ဆောင်စေပြီး ရှေ့တန်းစစ်မျက်နာသို့ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။ ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်ထံပါးလိုက်သော ထိုပေလွှာတွင် Uriah အား အပြင်းထန်ဆုံး စစ်မျက်နာတွင် တာဝန်ပေးရန် ရေးသားထားသည်။ Uriah တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသွားသည်။ ဒါဝိဒ် မင်းက သူ၏ဇနီး Bathsheba ကို မိဘုရားအဖြစ် သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။
သူ ရက်ရက်စက်စက် ကျူးလွန်ခဲ့သော ဤ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု ၏ပြစ်ဒဏ်ကို ဒါဝိဒ် မင်း အဘယ်ကြောင့် မခံစားရသနည်းဟု လူ အတော်များများက စဉ်းစားထင်ယောင်ကြသည်။ မဟုတ်ခဲ့ပါ၊ ဒါဝိဒ်မင်း သည် သူကျူးလွန်ခဲ့သော ဤလူမှုရေးဖောက်ပြားမှုကြောင့် အလွန်လေးလံသော၊ ကြီးလေးသော၊ နာကျဉ်သော ပြစ်ဒဏ် မျိုးစုံကို သူ့ဘဝ၏ နောက်ဆုံး အချိန်အထိ တမြေ့မြေ့ခံစားရင်း ပေးဆပ်သွားခဲ့ရပါသည်။ ဒါဝိဒ် ယူကျုံးမရ နောင်တရပါသည်၊ သို့သော် Bathsheba နှင့် ရသော သူအလွန်ချစ်ရပါသော အပြစ်မဲ့ ကလေးငယ်၏ အသက်ကို ဘုရားသခင် နှုတ်ယူခဲ့သည်။ ဤလူမှုရေးဖောက်ပြန် ကျူးလွန်သည့် အချိန်မှစပြီး သူ၏အောင်မြင်မှုအားလုံး ဆုတ်ယုတ်မှုဖက်သို့ ကျဆင်းသွားသည်။ ဒါဝိဒ်၏ ဘဝအသက်တာကို ပြန်ကြည့်လျှင် ဤအချိန်သည် သူ့ဘဝ၏ ထိပ်ဆုံးရောက်ရှိချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အသက်တာ တစ်ခုလုံးသည် ကုန်းဆင်းကို လှိမ့်ဆင်းသွားသည့် လှည်းပမာဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျမ်းစာကို အသေအချာ ဖတ်ကြည့်လျှင် ပို၍ပို၍ အောင်မြင်သော၊ ကျေနပ် အားကျစရာကောင်းသော ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီး များကို အရင်ထက် ဆထက်ထမ်းပိုး ခံစားရသည် ဟုမဖတ်ရတော့ဘဲ။ မိသားစု ပြဿနာမျိုးစုံ၊ ရှက်ရွံ့စရာကောင်းသော မိသားစု အတွင်းပြဿများ တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုသာ ဖတ်ရသည်။ သူ၏ သားတော် တစ်ပါးက ညီမတော်သူ သမီးတော်တစ်ပါးကို မတရား မုဒိန်းကျင့်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရသည်။ ဤပြစ်မှုအတွက် ဒါဝိဒ်မင်း က မည်သည့် အရေးယူမှုကို မျှ မပြုလုပ်သောကြောင့် မကျေနပ်သော အခြားသားတော်တစ်ပါး ဖြစ်သူ Absolom က မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်သူ ညီအစ်ကို အချင်းချင်းကို ပြန်သတ်ပြီး တိုင်းတပါးသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သည့် အကြောင်းဖတ်ရသည်။ သုံးနှစ်လွန်သော အခါ ဒါဝိဒ် မင်းက သားတော် Absolom အား ပြည်တော်ပြန်ရန် ဆင့်ခေါ်သော်လည်း သားတော်က ပြန်ရန် ငြင်းဆိုသည့် အပြင် နောက်လိုက် အပေါင်းအပါများ ကိုစုစည်းပြီး ခမည်းတော် ဒါဝိဒ် မင်းကို ပုန်ကန်ရန် ကြံစည်သည်။ သားတော်အရင်း၏ ပုန်ကန်တော်လှန်မှုကြောင့် နန်းစိုက်ရာ ဂျေရုဆလင် မှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ရသည်အထိဖြစ်သွားသည်။ နောက်ဆုံး တစ်ခုသော တိုက်ပွဲတွင် သားတော် Absolom အသက်ကို အသေမသတ်ရ၊ အရှင်ဖမ်းရမည်ဟု ဒါဝိဒ်မင်း အမိန့်ထုတ်ထားသော်လည်း အမိန့်တော်ကို တမင်သက်သက် မလိုက်နာဘဲ သားတော် Absolum အသတ်ခံရပြီး မှ ဤပြဿနာပြီးဆုံးသွားသည်။ သားတော်အသတ်ခံရသဖြင့် ဒါဝိဒ်မင်း အကြီးအကျယ် ဝမ်းနည်းပူဆွေး သောကရောက်သည်ဟု ကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
နောက်ပိုင်း ဒါဝိဒ်မင်း သက်တော်ရကာ နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်လာသောအခါ အကြီးဆုံးသော သားတော် Adonijah သည် နောက်လိုက်တပည့်တပန်းများနှင့် ပွဲတော်ပြုလုပ်ကာ မိမိကိုယ်ကို ဘုရင်အဖြစ် ကြေညာသည်။ သို့သော် Solomon အား ခမည်းတော်၏ ထီးနန်းအရိုက်အရာ ဆက်ခံခွင့်ပေးပါမည်ဟု မိဘုရား Bathsheba အား ကတိပေးခဲ့ဖူးသည်ကို ဆွဲကိုင်လျက် မိဘုရားကတောင်းဆိုသည်။ ဒါဝိဒ်မင်း ကပေးခဲ့ဖူးသော သူ၏ကတိကိုထိမ်းကာ Solomon အားထီးနန်းအရိုက်အရာကို ပေးသည်။ တော်လှန်ပုန်မည့် အရေးကို ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် အနေနှင့် Solomon မင်းက အကို Adonijah ကို ကွက်မျက်လိုက်သည်။
သူ့၏ နောက်ဆုံးအချိန်တွင် သား Solomon မင်းကို ပြောသော စကားမှာ “မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏ သွားရာလမ်းသို့ ငါသွားရမည်။ သို့ဖြစ်၍အားယူလော့။ ယောကျ်ား၏ ဂုဏ်သတ္တိရှိလော့…..” (ဓမ္မရာဇဝင် တတိယ ၂း၂)။ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ် မင်း အနိစ္စရောက် ပြီး ဒါဝ်ဒ် မြို့တွင် င်္သဂြိုလ်ခြင်းကို ခံတော်မူသည်။ သူသည် လော်လီဖောက်ပြားသော လူသားတစ်ဦးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးအားထားလျက်၊ သူ့ဘဝ၏ ကျဆုံးချိန်တွင် ဘုရားသခင် ၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို နောင်တကြီးစွာဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့သူ မဟာ အာဂ္ဂလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကြောင်း . . .
7 words of Jesus
Tags: ဒါဝိဒ်, မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ, Thawngno
Previous New Year Message – Rev. Dr. Saw Lerhtoo